#ANC54: UNkosazana Dlamini-Zuma | News24
#ANC54: UNkosazana Dlamini-Zuma
IGAMA: Dkt Nkosazana Dlamini-Zuma
UMLANDO WAKHE KWEZEBUHOLI: UDkt Nkosazana Dlamini-Zuma unomlando omude wezobuholi kuhulumeni njengoba eseke waphatha eminyangweni embalwa kahulumeni futhi waba nguNgqongqoshe womnyango wezeMpilo (1994-1999), ezasiKhaya (2009 -2012) kanye nomnyango wezangaPhandle (1999-2009).
Ngo-2012 walishiya elakuleli eyothatha isikhundla sokuba ngowokuqala wesifazane ukuba nguSihlalo kaKhomishana we-African Union, kanti usanda kushiya lesi sikhundla ekuqaleni kuka-2017.
Selokhu abuya kwipolitiki yakuleli ugxile kakhulu emkhankasweni wakhe wokuthatha isikhundla sikaMengameli uJacob Zuma.
OKUHLE NGAYE: UDlamini-Zuma unolwazi oluningi njengomholi kuhulumeni kanye nakuKhongolose njengoba ajoyina lo mbutho esasewumfundi ewusebenzala ngezindlela eziningi esekubhaceni emazweni ahlukahlukene.
EsenguNgqongqoshe wezeMpilo uDlamini-Zuma wasungula futhi waqinisekisa uMthetho wokunqanda labo ababhemela emphakathini kanye nokukhangiswa kogwayi.
OKUBI: Ibudlelwane bakhe nalowo owayengumyeni wakhe uJacob Zuma kumenze waba ngumuntu ogxekwa kakhulu ngokuthi uzoqhuba izinhloso zikaZuma futhi ahambe ezinyathelweni zikaZuma. Okunye okusulakalayo wukuthi uzozama ukumvikela kungabe kusaqhutshekwa namacala enkohlakalo abekwe uZuma.
Umkhankaso wakhe wesekwa kakhulu ngabalandeli bakaZuma nokuyinto eyenza angatshazwe lomholi wesekwa nangamagatsha ahlukahlukene kaKhongolose okubalwa kuwo uphiko lwentsha kanye nolwabesimame.
UBUHOLI AZOGADLA NGABO: Yize ekhethe ukungahambisani nozakwabo iPhini likaMengameli uCyril Ramaphoya, ukhethe ubuholi bakhe azogadla ngabo ezikhundleni eziyisithupha eziphambili.
IPhini likaMengameli: David “DD” Mabuza
UNobhala-Jikelele: Ace Magashule
IPhini likaNobhala: Jessie Duarte
Usihlalo kaZwelonke: Nathi Mthethwa
UMgcinimafa: Maite Nkoana-Mashabane